धेरै मात्रामा कपाल झरेर अत्यन्तै चिन्तित हुनुहुन्छ ? उसोभए यो तेल लगाउनुहोस् हप्तामै देख्नुहुनेछ फरक – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/धेरै मात्रामा कपाल झरेर अत्यन्तै चिन्तित हुनुहुन्छ ? उसोभए यो तेल लगाउनुहोस् हप्तामै देख्नुहुनेछ फरक
धेरै मात्रामा कपाल झरेर अत्यन्तै चिन्तित हुनुहुन्छ ? उसोभए यो तेल लगाउनुहोस् हप्तामै देख्नुहुनेछ फरक
काठमाडौँ । आजको समयमा, खानपानको लापरवाहीको कारण धेरैजसो समस्याहरु उत्पन्न हुन्छ । व्यस्त दिनचर्याका कारणकपाल झर्ने समस्या सामान्य हुन थालेको छ । हो, यो दुबै महिला र पुरुषहरूमा देखीन्छ। यो समस्या एक तिहाइ पुरुष र महिलाहरूमा देखीन्छ।
आजको युग फॅशनेबल छ र यही कारणले धेरै मानिसहरू आफ्नो कपालमा टिन्ट, ब्लीच, स्ट्रेटनर, र डाई जस्तो रासायनिक उपचार अपनाउँछन्। यदि तपाईं यस प्रकारको उपचारको साथ नयाँ रूप प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, कपाललाई धेरै प्रकारका क्षतिहरू दिन्छ। न केवल यसले तपाईंको कपाल कमजोर बनाउँदछ, यसले तपाईंको कपाल पनि झार्ने गर्दछ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यदि तपाइँ निरन्तर कपाल पनि गुमाउँदै हुनुहुन्छ र तपाईं यी समस्याहरूबाट चिन्तित हुनुहुन्छ भने, तब आज हामी तपाईंलाई एउटा तेलको बारेमा बताउन जाँदैछौं जुन तपाईं यसको प्रयोगबाट कपाल फेरी उमार्नसक्नुहुन्छ । यो तेल तपाइँको लागि धेरै लाभदायक साबित हुनेछ। यदि एक महिनाको लागी यो तेल प्रयोग गर्नुहोस् तपाईले यस समस्याबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ ।
वास्तवमा, हामी तपाईलाई बताउँछौं कि तेल बनाउन हामी तपाईको बारेमा कुरा गरिरहेछौं, सबैभन्दा पहिले तपाईले जाबोरान्डी तेल र जैतुनको तेल मिलाउनु पर्छ र तपाईले यी दुई तेलहरूलाई एकसाथ मिस गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि यो मिश्रण गर्नुहोस्। बिहान र बेलुका दुबै टाउकोको मालिश गर्नुहोस् र यसलाई यस्तै छोड्नुहोस्। बिहान सबेरै कपाल धुनु अघि बाफ गर्नुहोस्, त्यसपछि आधा घण्टा पछि धुनुहोस् । कपालमा बाफ हप्तामा २ पटक मात्र लगाउने गर्नुहोस् ।
यो मात्र होईन, धेरै चोटि केश झर्ने समस्या देखा पर्दछ केहि रोगहरू जस्तै मधुमेह, ल्युपस र थाइरोइडले पनि कपाल झर्ने समस्या निम्त्याउन सक्छ, कपाल झर्नु दुवै अति(सक्रिय र कम सक्रिय थाइरोइड दुबैबाट सुरू हुन्छ। यदि तपाई यी रोगहरू मध्ये कुनैबाट पीडित हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले यी रोगहरुलाई नियन्त्रण गर्नुहोस् र माथिको विधि प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसपश्चात, यो विधि एकचोटि प्रयास गर्नुहोस् र यो अत्यन्त लाभदायक हुनेछ।
अनुहारको दाग-धब्बाले लज्जित हुनु परेको छ?घरमै बसी सजिलैसंग यसरी हटाउनुहोस्
सुहागरात भन्दा अघि इन्जिनियर बुहारीलाई सासुले बाथरुममा लिएर गइन्, अनि गरिन् लाजमर्दो हर्कत
आफ्नी सुन्दरी छोरीसँग विवाह गर्नेलाई दुई करोड दिने बुवाको घोसणा